isivumelwano: i-google pixel xl 128 gb ifika ngentengo ephansi kakhulu (kufakwe iwaranti yethu)
none Izindaba Nokubuyekezwa Idili: I-Google Pixel XL 128 GB ihlasela amanani aphansi okwamanje (kufakwe iwaranti yase-US)
Idili: I-Google Pixel XL 128 GB ihlasela amanani aphansi okwamanje (kufakwe iwaranti yase-US)
Uma udinga i-smartphone entsha enamanani acishe abe ngama- $ 300 futhi wena nama-apos awuhlatshwa umxhwele yisivuno samanje seziphatho ze-middle-range ezilingana nalesi sabelomali, idivaysi engakufanele ukunakwa yi-Google Pixel XL. Vele, lena akuyona imodeli entsha yefoni ngayinye, njengoba manje ineminyaka engu-2 ubudala, kepha manje ungathenga okwehlukile okuvuliwe okungu-128 GB, okusha sha (njengoba kungalungiswanga kabusha), ngo- $ 329.99.
Okwamanje, kubukeka sengathi i-B & H iyona kuphela umthengisi othengisa i-Google Pixel XL 128 GB engakhiyiwe ngo- $ 329.99 - ngalesi sixhumanisi - ngesiqinisekiso sase-US. Sikhuluma ngenguqulo ye-GSM + CDMA ye-smartphone lapha, ehambisana nazo zonke izinkampani ezinkulu zase-US: iVerizon, i-AT & T, iT-Mobile, ne-Sprint. Yazi, $ 329.99 intengo ephansi kakhulu yePixel XL 128 GB thina & apos esiyibonile kuze kube manje (kungacatshangelwa amadivayisi avuselelwe, noma lawo athengiswa ngaphandle kwewaranti yase-US). Qaphela ukuthi lesi sivumelwano se-B & H sizophelelwa yisikhathi ngoNovemba 15.
Imvamisa, thina & apos; asizimisele kakhulu ukuncoma ama-smartphones aneminyaka emibili ubudala. Kodwa-ke, iGoogle Pixel XL ingavuselelwa ngokusemthethweni ibe yi-Android 9 Pie yakamuva, futhi iqinisekisiwe ukuthola ama-updates ezokuphepha kuze kube ngu-Okthoba 2019 (okungenani). Ngaphezu kwalokho, eceleni kwesikhala sokugcina esingu-128 GB, wena nokuthola kwakho iprosesa enesizotha ye-Snapdragon 821, i-4 GB ye-RAM, isibonisi esingu-5.5-intshi ngamaphikseli ayi-1440 x 2560, nekhamera engemuva engathatha izithombe ezinhle impela. Impela, ama-bezels amakhulu we-ex-flagship & apos awasahehi kakhulu manje, lapho ama-handsets amaningi esebenzisa amadizayini angaphansi kwe-bezel, kepha kungenzeka ukuthi amanye amakhasimende angakuboni njengokwephula isivumelwano.
Ngabe ucabanga ukuthi iPixel XL 128 GB ibiza u- $ 329.99? Uma kungenjalo, yimaphi amanye amafoni (anewaranti yase-US) ongacabanga ukuwathola ngaleli nani kunalokho?
Ukunikezwa kwe-tv ye-apple
Isibuyekezo sesoftware samsung galaxy s6
I-samsung s10 ibonisa amaphesenti ebhethri
KULUNGILE, kodwa kungani? I-Apple izokuvumela ukuthi usakaze isikrini sakho se-iPhone bukhoma ku-Facebook
Ungayinika kanjani amandla imodi yokwakheka kusikrini sakho sasekhaya se-Android & apos; (nge-Google Now)
Azisekho izingxoxo zamavidiyo weqembu ku-Hangouts; Abasebenzisi be-Android kufanele basebenzise lolu hlelo lokusebenza esikhundleni salokho
U-Apple uxwayisa abathengi ukuthi bangaweli kumkhonyovu odumile wekhadi lesipho le-iTunes
IPUBG Mobile ithola umbono womuntu wokuqala, iSizini 1 yeRoyale Pass kusibuyekezo sakamuva
I-Best Buy inikeza isipikha esihlakaniphile samahhala seKhaya le-Google Home ngokuthengwa kwezinto ezithile ze-& apos; smart '
I-Google Amamephu, izibuyekezo ze-Waze zengeza ukuhlanganiswa kweSiri kwe-iOS 13 neCarPlay
Ungayithuthukisa Kanjani Uhlaka Lokuzenzekelayo Lokuhlola Kusuka Ekuqaleni?